Sebenzisa isampulu yasekhaya yase-comScore yaseMelika njengesiseko, umndilili we-cookies ezi-2.5 ezahlukileyo zaqwalaselwa kwikhompyuter nganye ye-Yahoo! Oku kufumanisa kubonisa ukuba, ngenxa yokucinywa kwecookie, inkqubo yokulinganisa ikhesenti esebenzisa ikuki ukulinganisa ubungakanani besiseko sabatyeleli besiza esiya kugqithisela kwinani lokwenyani labakhenkethi abakhethekileyo nge-2.5x, oko kukuthi ukugqithisa ukuya kuthi ga kwiipesenti ezili-150. Kwangokunjalo, uphononongo lufumanise ukuba inkqubo yeseva yentengiso esebenzisa ikuki ukulandelela ukufikelela kunye nokuphindaphindeka kwephulo lentengiso kwi-Intanethi kuya kugqithisela ukufikelela kwinqanaba ukuya kuthi ga kwi-2.6x kunye nokuhamba rhoqo kumgangatho ofanayo. Obona bukhulu bokubaxwa kwezinto kuxhomekeke kubuninzi bokundwendwela isiza okanye ukuvezwa kwephulo.
Le yingxaki kwisihlwele esidala se 'eyeballs'. Ngelixa abantu abathengisayo bahlala bethengisa ngamanani, iiwebhusayithi zabo zinokuba neendwendwe ezimbalwa kakhulu kunamajelo eendaba okhuphisanayo. Ewe kunjalo, akukho ndlela yokwenyani 'yokulungisa' umba. Nangona nabuphi na ubuchwephesha bewebhu obunesiqingatha sobuchopho buqonda ukuba kunjalo, andizami ukutsho ukuba iisayithi zinenjongo yokugqithisa amanani abo. Abazibaxi izibalo zabo ngenjongo… banika ingxelo kumanani manqanaba asemgangathweni. Iinkcukacha-manani ezenzeka ukuba zingathembeki kakhulu.
Juni 8, 2007 ngo-1: 48 AM
Mhlawumbi kwixa elizayo into ehamba kwimigca yeCardSpace iya kuyikhanyisa le ngxaki. Nangona kunjalo, inokuba nguMzalwana omkhulu kakhulu. Kuya kufuneka silinde ukuze sibone.
Juni 8, 2007 ngo-8: 32 AM
uthe, akukho ndlela ichanekileyo yokumisela iindwendwe ezizodwa kwiwebhusayithi.
cookies azithembekanga kwaye ngoku abantu abaninzi basebenzisa ifleshi yokugcina icala lomxhasi.
Kodwa kubathengisi, ukujonga iphepha kuko konke okubalulekileyo. Kulula ukufumanisa ngokuchanekileyo amanani amaxesha intengiso ebonisiweyo 🙂
Kwaye emva koko, uninzi lweenkonzo zeenkcukacha manani zewebhu zinengxaki yazo. Indawo yokuhlala enezibalo ezinje ngokubala kuya kuthatha inani eliqingqiweyo labasebenzisi ngexesha.
Uhlalutyo lukaGoogle lubhetele kakhulu koku, kodwa ngamanye amaxesha kuye kufuneke ndilinde iintsuku ezi-2 ukufumana ingxelo yokugqibela 🙁
"Umndilili we-2.5 yeekuki ezizodwa yaqwalaselwa kwikhompyuter nganye ye-Yahoo!"
Bangaphi abasebenzisi be-Yahoo abakho kwikhompyuter nganye? Ewe, mhlawumbi ujikeleze i-2 okanye i-3. Ndiyazi ukuba ndihlala ndingena emfazini wam ukuze ndikwazi ukujonga iakhawunti yam, nokuba ikwiYahoo okanye kuGoogle, eSchwab okanye nakweyiphi na enye indawo.
Endlwini yethu, sinee-PC ezi-4 kunye neMac kwi-Intanethi phakathi kwabantu abadala aba-2, ke kuyenzeka nokuba unekhompyuter enye okanye ezininzi.
Ukuba unesiza serej kunye neelogs zakho ziluncedo, yenza ingxelo yamagama kwidilesi nganye ye-IP. (Oku kubonisa ukuba bangaphi abantu ababelana ngeekhompyuter / abaneeakhawunti zedup). Emva koko yenza ingxelo ebonisa ukuba mangaphi amagama e-IP igama ngalinye avele kuwo. (Oku kubonisa ukuba a) ii-ips ziphinda ziphinde zenziwe kwakhona zi-isps kunye b) nabasebenzisi bangene kwiindawo ze-mulitiple. )
Ewe ewe, inani elingu-2.5 lilungile. Hayi ubuqhetseba, ungagqithisi, kulungile. Akukho bali apha. Hambisa ngoku.
Inqaku elibhaliweyo alixubushi ngemicimbi yokungena / yokungena ngokubhekisele kwicookies, lithetha ngecookie Ukucinywa kunye nefuthe lazo kumaphepha awodwa okujonga iphepha. Yahoo! ayizicimi ii-cookies xa uphuma kwaye ungena.
Umcimbi kukuba ngaphezulu kwe-30% yemizi IZIKHUSELE iicookies zabo, ke ngoko ubonwa njengondwendwe olutsha… hayi elinye kwikhaya. Nceda ufunde eli nqaku ukuze ufumane inkcazo enzulu ngakumbi.
Umzekelo wakho yinto endiyithethileyo kwiposti yam, yokuba abantu abaninzi bandwendwela indawo enye ukusuka koomatshini abaninzi. Ngee-PC ezine kunye neMac phakathi kwabantu abadala aba-4, ukuba undwendwela indawo enye kubo bonke oomatshini, unokubonwa ukuya kuthi ga kwi-2 'yeendwendwe ezizodwa', hayi i-5! Kwaye ukuba uhlala ucima iicookies njengama-2.5% + yabemi, ezijika zibe ngaphezulu kwe-30 yeendwendwe ezizodwa.
Njengoko benditshilo, andikholelwa ukuba bubuqhetseba… kodwa IXHILE. Indlu yakho iyakungqina oku.
Ukuphinda ufunde inqaku kwaye uphendule kwakhona…ulungile. Ndiqale ndayiqonda kakubi inqaku lakho. Enkosi ngokucacisa.
Oko bekutshiwo, i-gautam ilungile-ngakumbi kwaye abantu abaninzi basebenzisa ii-cookies, nangona bengenaso esinye isizathu sokuhambisa ifleshi. Imfihlo encinci emdaka: ngekhe (ngokulula) ucime iicookies ezisethwe kwi-flash yakho.
(I-Google ayisebenzi ngokukhawuleza okukhulu. I-DoubleClick yenza…)
Ukuba iisayithi zifuna ukuza zicocekile kubathengisi, bafuna ukubekwa elubala ngakumbi malunga nokuba zingaphi izihlandlo ezibonwe ngubani kwaye nini.
Kuba iifayile ze-log azilunganga kuloo nto, baya kufuna idatha eninzi kwindawo yogcino lwedatha. Isiseko sedatha esikhulu kakhulu.
Kuba ayizukwenzeka kungekudala, olona luvo lubalaseleyo, njengoko usitsho, kukugxila kwiziphumo!